Enwere m ike ịzụta ịnyịnya ígwè ọhụrụ n'ịntanetị? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Buyzụta igwe kwụ otu ebe ọhụrụ - olee otu ị ga-esi edozi
Buyzụta igwe kwụ otu ebe ọhụrụ - olee otu ị ga-esi edozi
Enwere m ike ịzụta ịnyịnya ígwè ọhụrụ n'ịntanetị?
ZụtaArsgbọ ala &Bikes Online
Zụtaụgbọ alan'ịntanetịna India site na Paytm Mall, nwee ụgbọ ala gị taa! Inyocha nnukwu nso nkekacha ọhụrụ Bikes onlinena India na ọnụahịa kacha mma. Nwee ọ ultimateụ ahụmahụ kachasị na ịnya ịnyịnya na mkpokọta naanịanyịnya igwe& ụgbọalan'ịntanetịna Paytm Mall.
Lelee gị ma ọ bụ ma eleghị anya ọ ka mma na ị bụghị ndụ na-eme ngwa ngwa ma ị gaghị anọgidesi ike na ị lụrụ di ma ọ bụ nwunye nwere nwa ewu nwere ọfịs ọfịs na-agbawa obi wee kwaga nke ọma ị malitere azụmaahịa gị na-eme nrọ na -eme tebụl maka squirrels, ha kwuru na ị ga-abụ onye nzuzu, mana ugbu a azụmahịa na-aga n'ihu na ị bi onye ibe gị, ma ụbọchị ndị a ị na-arụsi ọrụ ike nke na ị na-echefu iri nri ma enwere m olileanya na agụụ anaghị agụ gị n'ihi na ị gafere ụfụfụ na nwunye gị nwere ọrụ diaper na n'etiti abalị gwara gị ka ịzụọ ahịa echi echi elu ụbọchị ọhụụ bilie kọfị were ekwentị oku izipu ihe ọrịre ọganiihu njehie nsogbu nọmba mgbakọ na mwepụ mpempe akwụkwọ mmefu ego kọfị mpụ agụụ na-agụ tost kukumba mọstad na a banana ahịa ego spreadsheets mmefu ego ọmarịcha ọrụ ị kwesịrị ezumike nwunye gị na-abịa n'ụlọ rapaara ụbọchị niile, ịmaghị na ọ bụ ihe dị otu a na mpụga ụbọchị ọ nwere ike ịbụ oge maka ịgba ịnyịnya ígwè, oh ọ jidere gị, onye ofufe na-eche na ịnya ịnyịnya ígwè gị na-eme ihere, na-adị mma, ọ na-eme ka uche gị pụọ ma nweta gị ahụ na-agagharị, mana ịchefula onye iro gị, na ugwu ahụ, na ugbu a jello ụkwụ, na mberede, onye na-agba ịnyịnya ibu na-ejide gị na ha enweghị nsogbu ọ bụla. bụ na a moto hụrụ ihe dị ka nke a n'ihu, ọ bụ na a magazine, ọ bụ a igwe kwụ otu ebe na pedaling na-enyere site na ọkụ eletrik oge ọ bụla ị pedal gị ume atọ ọ dị ka ị na-magically ike ọ dịghị gas dịghị gas dị mma Oge ịzụta e-igwe kwụ otu ebe e-igwe kwụ otu ebe site a Ihọd online na-ewe ya n'ụlọ Ọ bụ oge ka Ibu Ibu gị ohuru unyi Ọ Burns Ọ bụghị oge ikpeazụ ị mụtara na ọ bụghị igwe eletrik niile ka e kere? Gaa ebe ahụ ma zụta e-igwe kwesịrị ekwesị. Gwa onye ọkachamara maara igwe kwụ otu ebe a bụ ọdịnihu nakwa na ihe ndị a ga-agbanwe ndụ m, gbakwunye nke m, ọbụna erere m ụgbọ ala m nọ na ya, ị ga-ewere ya ha sị oh, a na m arụ ọrụ ebe a, ọ bụghị m hụrụ ihe ndị a n'anya n'ihi ya ị chọrọ nke a oh kwupụta na dị egwu ma ị zụrụ ya na agbanyeghị na oge a ebay gị anaghị agbawa na ọkụ ị na-eche na-ekweghị ekwe dị ka a ga - asị na ịnweghị ike ịkwọ ụgbọala ruo mgbe ebighi ebi oge a ị nwere ugwu ugwu mepere emepe na - aga ngwa ngwa ị nọ nso ụlọ mana adịghị njikere ịla ụlọ ma ị chọtara ihe ihe a nwere ike ime iji hụ ihe ị hụtụbeghị dịka ọmarịcha ụlọ a na nwoke a na-egwu ahịhịa n'ime uwe ya dị oke mma mana ezinụlọ gị na-efunahụ ihe chere na ọ bụ oge iji wulite tebụl picnic ọzọ, zụta igwe elektrọnik ọzọ na oge ezinụlọ ga-akawanye nke ọma, mana chere, enwere ihe ọzọ, ị nwetara usoro kachasịnụ, ụbọchị ọ bụla ị na-alụ ọgụ, ahyes baby, oge eruola igwe kwụ otu ebe, na-ahapụ ụlọ, na ọ bụ agaghịkwa ịta ahụhụ bụ ahụmahụ ị na-eje ije jupụtara carpets n'ụtụtụ echi ị nwetara oku ekwentị na akụkọ ọjọọ gị nnukwu ọrụ mbụ nke afọ dara site na mgbe ụfọdụ ndụ na-emekọ gị aka ọjọọ, mana ihe niile ị ga - eme bụ ịlaghachi n'elu ịnyịnya ma mee lemonade ma ọ bụ na anaghị m 'Amaara m na okwu siri ike bụ ihe siri ike ma ọ bụrụ na obi adịghị gị mma. Gaa na ịnyịnya iji kpochapụ isi gị.
Bịa n’ụzọ ị na-ahụtụbeghị mbụ. Wepụta oge iji tọgharịa ya ma ghọta na nke a bụ naanị ngagharị n'okporo ụzọ na njem gị, ị ga-agagharị na onye ọlụlụ mana lekọta ezinụlọ nke nchikota gị na mbụ
Ego ole ka igwe igwe ọhụrụ na-efu?
Otú ọ dị, ndị na-esonụ bụnkezi ọnụahịana ị nwere ike ịrụ ọrụ na: Roadzọigwe kwụ otu ebe$ 350-700. Ugwuigwe kwụ otu ebe$ 1000. Single-ọsọigwe kwụ otu ebe$ 400.
Lelee gị. Na-na na na mediocre ahịhịa akpa araparawo a nwụrụ anwụ ọgwụgwụ na-enweghị ihe ọ bụla na ndụ na-eme ka ị nwee obi ụtọ. Ọbụna nnụnụ ahụ chere na ị bụ onye emeriri. (Nnụnụ na-ada ụda) Oge eruola maka mgbanwe.
Gaa n'èzí. You na-ahụ ụmụaka a? Ha nwere oge kachasị mma nke ndụ ha na igwe kwụ otu ebe. Ha ma ihe na-emenụ.
Gaghị ekpori ndụ dịka ụmụaka a. Ọ gwụla ma ị zụtara igwe kwụ otu ebe. Gaa na ụlọ ahịa na-ege ntị ụfọdụ okorobịa na-amaghị ihe ọ na-ekwu.
elu abụba vs nnukwu carb
Gbalịa ire onwe gị igwe kwụ otu ebe. Bulie igwe kwụ otu ebe ma zụta ya. Jikere ma kụọ ụzọ ụkwụ dị na mpaghara gị.
Ọ bụ oge na-agba ịnyịnya ọhụrụ gị igwe kwụ otu ebe. (Bike pound) (moans) Mara na ọ bụghị igwe kwụ otu ebe na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe ka emepụtara. Nwaa ọzọ.
Gbaa ịnyịnya ihe i nwere ike na-adịghị mesie ihe ị na-apụghị. Ọ ga-adị mfe. Ga-enwe mmetụta ka mma, mba Ruo mgbe ị matara na ọ dịghị onye ọzọ na-agba ịnyịnya t-shirt na akwa khaki.
Oge iji ejiji. Onwem dị ka nke a. Jiri nnukwu okwu were dị ka shred na gnar.
Gaba, ka a chụkwute gị n’elu ugwu na ugwu. Ọchịchọ nke ka mma ga-eto n’ime gị. Ichegbu onwe gị banyere igwe kwụ otu ebe.
Nke a nwere ihe ndị ọzọ, ndị ọzọ na-ama jijiji na oche oche na-arịgo na ala. - Mara mma. - Ọ bụghịzi naanị ịkwọ ụgbọala mgbọrọgwụ, izipu tụlee na ịmụ aghụghọ.
Aha ya bụ Jess na ọ na-anya ụgbọ kwa. Ọ na-ajụ, sị, 'younu chọrọ ịnya ụgbọ elu oge ụfọdụ? 'Ma ị na-asị' Na na na! 'Ọ bịara bụrụ na Jess dị mma. Dị ka, rea lly mma.
Ọ na-azụ gị na ịrịgo na ụzọ niile ala. Nweghị ike ịgbadata, ihe ọ na-agba. Make na-eme ya ala mana ike gwụrụ gị.
Ọ na-eche 30 nkeji mana ọ na-ekwu na ọ bụ ọtụtụ ihe ọ funụ. O kwuru na ị kwesịrị ime ya ọzọ oge ụfọdụ. I kwenyere ọbụlagodi na ọ gweriri gị.
Mana nke ahụ anaghị enye gị nsogbu rue elekere ụbọchị. (Wine) (bass arọ hip hop music) mgbe ọrụ ụbọchị. Chọta otu dị iche iche ma soro ndị ọkwọ ụgbọ ala ga-enyere gị aka ịmezi egwuregwu gị.
Bụrụ onye ọkwọ ụgbọala ka mma site na ịnwale ịdebe. (Bass heavy, hip music) Rịba ama anyịnya igwe ndị ọzọ, dị ka igwe kwụ otu ebe a, na igwe kwụ otu ebe. Cycgba ígwè n'okporo ụzọ pụrụ ịbụ ihe ọchị.
Nọdụ ala na a unyi jumper na-ahụ a ole na ole jumps na-eme gị aghụghọ. Ihe a siri ike karịa ka ị siri chee. Ọ dị elu, nke ahụ jọgburu onwe ya.
Mba Gbaa ịnyịnya ọzọ, rịgoro n'elu, wụkwuo elu, ma gaa ọsọ ọsọ karịa ka ị chetụrụla. Na-elekọta gị igwe kwụ otu ebe na mma ya.
Zụta akụrụngwa, zụta akụkụ, zụta ọtụtụ ngwaọrụ iji wụnye akụkụ ahụ. Wepụta awa iji kpebie igwe kwụ otu ebe ọzọ. Chọpụta nrọ gị na carbon.
Ihe riri gị ahụ ga-aka njọ. Ga-eji obere oge rụọ ọrụ na oge ị ga-elele igwe kwụ otu ebe. Gbaa ịnyịnya ọzọ, gbudakwuo ahịhịa.
More ụzọ ụkwụ, ọzọ Lawn. Ilszọ ụkwụ, Lawn. Zụta igwe kwụ otu ebe gị.
Weta ụfọdụ ndị enyi ma gbagoo elu na karịa karịa mgbe ọ bụla. Hapụ igwe kwụ otu ebe gị, gaa ebe ndị amamamịghe dị. Gaa na ụbọchị ọzọ.
Oge a ị bụ n'ezie ị nwere ike ijide. Enweghị mgbaghara, enweghị mgbaghara. Nke a ka mma.
Oge a ọ ga - eti gị naanị na nkeji ise, ị ga - enwe obi abụọ, elu ise, o nweghị ike ikwenye ole ị nwetara. Ndewo ndewo, otu ụbọchị ị hụrụ nkwupụta mgbasa ozi banyere igwe ọhụrụ ọhụụ, ọ dị ka nke gị mana 15% ọkụ, 35% siri ike na uhie. Ọ na-efu nnukwu turf karịa igwe kwụ otu ebe ị zụtara.
Were igwe kwụ otu ebe ka ị gafee ya. Ghọta otu ị si mee nke ọma na ịnwee ịkwọ ụgbọala na-atọ ụtọ. Ọ bụghị maka igwe kwụ otu ebe ị na - agba, ọ bụ maka ịnyịnya nke igwe kwụ otu ebe gị na - ebu gị. (Ikuku hisses) Ọfọn, ma eleghị anya ọ bụghị nke a. ('Agara m ihe ọ Juụ Juụ ahụ' site na Dream Junkies) Na mpaghara m, ha hụrụ ya n'anya ♪♪ M ga-agbaji ya ♪♪ Dị ka ịgbanye injin na ♪♪ Ascension ♪♪ Akụkụ ọ bụla na-elebara m anya ♪♪ Lee mkpụrụ obi m ♪ Lee obi m anya ♪♪ Lee olile anya m ♪♪ Nwee ụwa n'azụ m ♪♪ Ma m ka bu ya ♪♪ Gwa ha na Chineke nwere aka m ♪♪ Agaghị m ahapụ ya ♪♪ III bịara site n'akụkụ nke oké osimiri ♪♪ Swam 'em nke kachasị mma ♪♪ enweghị m ike ịgọnahụ na ahọpụtara m ♪♪ Ee, ọ bụ miggity macking Milking igwe okwu ♪♪ Echeghị m na m ga-enyeghachi ya ♪
Ekwesịrị m ịzụta igwe kwụ otu ebe ọhụrụ?
Ezigbo ihe kpatara iji nweta aigwe kwụ otu ebe ọhụrụ
N'ihi na ndị nrụpụta na-agwa gị afọ ndị a ụdị 20% siri ike karị, 12% ọkụ, 7% karịa ikuku na naanị 33% karịa ọnụ. Ọ bụrụ na ịzụta, onye obula nwere mmeri! Ọ bụrụ na i meghịzụta igwe kwụ otu ebe, ọ pụtara na ị ga-anọkwasị aigwe kwụ otu ebenke ahụ nwere ike iji nwayọọ karịa gịnwere ikena-agba ịnyịnya.Ọkt 8 2014
Ndi igwe Walmart di nma?
Walmart anyịnya igwedị arọ, arụghị nke ọma, ma jiri obere ihe mejupụtara ya.Walmart anyịnya igwenwere ike bụrụ ihe dị egwu ịnya ịnyịnya. Kemgbe ọtụtụ afọ, enwere m 4 ma ọ bụ 5 dị iche icheWalmart anyịnya igwe. Dị ka nwatakịrị, m na-agba ịnyịnya ọnụ alaWalmartugwu Mongooseigwe kwụ otu eberuo ọtụtụ afọ na-enweghị nsogbu ọ bụla na-abụghị ụlọ ole na ole na ụkwụ agbajiri agbaji.Ọnwa Ise 30, 2021
(ngwa ngwa rhythmic music) - The Schwinn Axum bụ eleghị anya, otu n'ime ihe ndị ọzọ na-akpali anyịnya igwe m mere a isiokwu nke. Ọ bụ eleghị anya, otu nke kasị mma anyịnya igwe i nwere ike inweta site na Walmart ugbu a, na n'ihi na ihe dị n'okpuru $ 400, ọ na-emepụta a-akpali nnọọ mmasị ntinye-larịị nhọrọ. M natara a igwe kwụ otu ebe na mbubreyo February, ma dị mwute ikwu na Colorado ihu igwe ghọrọ ike.
Ebe ọ bụ na enweghị m ike ịnya ịnyịnya ígwè ahụ, ekpebiri m iwepụ ya iche wee hụ ego ole $ 398 ị nwetara. Ọ dị mma, yabụ ka anyị bido na wiilị ụkwụ dị n’ihu iji wepụ ya n’ụzọ. Ọ na - eji ngwa ngwa ịhapụ ngwa ngwa ma nwee ihe ntụgharị 180 millimita, ka anyị wepụ derailleur ahụ.
Nke a bụ ụdị ụdị nkwonkwo ụlọ nke ha ji bịa. Ọ na-eji nke a na-akpali nnọọ mmasị abụọ nkwonkwo. Okwesiri igbakwunye esemokwu na onu ogugu dika njigide nke ndi mmadu gha eme, ma ileghachi anya n'a gha acho ka odi nke oma.
Ugbu a, ka anyị were ogwe aka a. Anyị na-ahụkwa na a na-ejide ha na nkwado ndabere akụkụ okirikiri. Enwere ike wepu ha n'ụzọ dị mfe na crank puller.
Mgbe crank ogwe aka na-ewepụ anyị nwere ike ịhụ na ndị yinye na-n'ezie na-kewapụrụ crank ogwe aka, nke na-adịghị mma n'ihi na ọ bụrụ na yinye ya eyi na ị ga-esi na-esi a dum ọhụrụ crankset. Enwere ike wepu ihe nkwado ala site na iji ngwa ọrụ ọkọlọtọ ma kpọọ ya ụdị iko-na-cone. Have nwere axle a siri ike nke na-aga na bọlbụ ndị a. (Clink metal) typedị nkwado a dị adị ruo nwa oge, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ bụghị nke kachasị ike, ọ ga-ezuru ndị na-amalite ịmalite ụzọ ugbu a Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwee mkpa ịkwesịrị ịmara na ị ghọtara ụkpụrụ ị nwere.
N'ihi ya, ejikọtala m isiokwu abụọ n'okpuru iji nyere gị aka ịghọta ụdị cranks na brackets dị iche iche. O di nwute na enwere otutu. (Kabelc Snap) Iji mee ka igwe kwụ otu ebe belata, ị nwere eriri igwe anki na-arụ ọrụ, obere ihe gbasara breeki diski a bụ na ị ga-edozi akụkụ ahụ n'akụkụ ọ bụla yana ịkwanye mpempe akwụkwọ breeki ọzọ ka ihe niile wee wears evenly.
Gịnị mere na anyị agaghị ezumike? site na obi uto a niile ma hu otu o si ekpo oku n'èzí? (Na-agba ọsọ snow) (jazzy music) Na brek na-eche ntakịrị stipụ nke igbe, ma ha nwere ike ha ga-agwụ, na i nwere ike tinye a bit nke na-acha ọcha griiz kwa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ dị mma ya. Ngwongwo gia na-abụkarị plastik, (breeki pịa) mana ọ dị mma. Ọ na-agbachi nke ọma ma nwee clicks na-enye afọ ojuju.
Ọ dị mma ịhụ na onye ọrụ aka nwere ike dochie eriri USB gbanwere ma ọ bụ gbajiri agbaji. Ọ bụ ezie na ekweisi dị mfe, ọ nwere ezigbo ụlọ. (Clink nke metal) Isi nchegbu m bụ na ọ dịghị abụba ebe a.
Ọ bụ ihu ọma ntakịrị maka mbupu, nke ahụ bụ ya. Na igwe kwụ otu ebe maka ihe dị ka $ 400, ndụdụ ahụ abụghị ihe ijuanya na ọ na-abịa yana njikwa dị mfe, ngbanwe mkpọchi mkpọchi na ndozi ndozi. Ugbu a, ka anyị kwuo maka nguzo ahụ Walmart chọrọ ka igwe kwụ otu ebe niile a na-ere site na ha wee nwee ọgba tum tum ahụ. (Clink of metal) Yabụ ugbu a, ka anyị leba anya na okpokolo a - Whoa! (chị ọchị) Chineke, nke ahụ dị ka, m na-ekwu pound ise.
Ọ naghị adị ọnụ ala, ọ dị ka ezigbo eku. Igwe kwụ otu ebe a nwere ike ịnwe ike. Ka anyị hụ otú ọ arọ. 2,200 gram, 4.85 pound n'ihi na enweghị m ike ịme mgbakọ na mwepụ, mana ee, ihe dịka pound ise! Agaghị m agha ụgha, echere m na ọtụtụ ibu sitere na ndụdụ a.
Ọ dị arọ! Kedu? Chaị! Kilogram 2,800! 2,815.6. 21 lbs - Aga m ezumike ebe a n'ihi na ka m na-edezi nke a, achọpụtara m na ikpe ikpe ndụdụ ahụ site na ịdị arọ ya naanị bụ oke iwe.
Ka m kọwaa mgbe ịzụrụ igwe kwụ otu ebe $ 400, ị ga-emerịrị iji chekwaa ego, otu n'ime ebe ndị mbụ ha ga-emebi bụ na ndụdụ, ọ bụ ya mere na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma dịka m mere Mana ọ dịghị 't n'ihi na ọ dị arọ, ọ bụ n'ihi ewu ya. Ihe atụ: ndụdụ GT Avalanche dịkwa oke ọnụ, mana ọ mere nke ọma karịa Axum n'otu ụzọ ahụ. N'ụzọ na-akpali mmasị, Otú ọ dị, mgbe ị na-ebu ibu ya, ọ dị ntakịrị ntakịrị karịa ndụdụ nke bịara na Axum.
Nnukwu ihe dị iche bụ naanị ihe eji eme ya. Achọpụtara m n'ezie isiokwu abụọ nke ndụdụ ndị a ka ekpokọtara, yabụ nke a bụ isiokwu nke ndụdụ Axum na-agbasasị ma ị nwere ike ịhụ ihe niile mejupụtara Ugbu a ka anyị lelee ndụdụ ahụ nke jiri GT wee wee ma eleghị anya ọ ga-esiri gị ike Rịba ama ma nnukwu gbakwunyere bụ na ndụdụ a nwere isi iyi abụọ buru ibu na nke ahụ ga-enyere gị aka n'ezie mgbe ụzọ ahụ siri ike. Ihe ọzọ dị mkpa dị mkpa bụ stanchion size ma ọ bụ ọkpụrụkpụ nke ndụdụ ahụ.
Igwe stanks nke Axum fork nwere dayameta nke 28 millimita, ebe stanch nke GT fork bụ 30 milimita. Nke ahụ anaghị ada ụda ka ukwuu, mana ọ nwere ike ime mgbanwe na ndụdụ ahụ na-esiwanye ike ma na-atụ aka na ntụpọ ịchọrọ ka ọ gawa. Ka anyị cheta, nke a bụ $ 400 igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ maka onye na-achọ ịmalite igwe kwụ otu ebe na nke mbụ ya.
Ha agaghị anọ n'ụzọ abụọ Black Diamond, na nke a, ọ ga-ezuru iji nweta ọrụ ahụ. Ee ee, Amaara m na ị nwere ike iwepụ ụfọdụ nrụgide ahụ site na igwe kwụ otu ebe site na ị nweta onwe gị mma ndụdụ, mana nke ahụ bụ ọnụahịa niile na arụmọrụ na mkparịta ụka dị arọ maka ụbọchị ọzọ. Cassette bụ 8-ọsọ cassette na 11 ruo 40 ezé ma na-enye ezigbo nso maka ọnụahịa ahụ.
Ihe taya ahụ bụ 29 x 2.6 nke na-enye ụda traction ma na-enyekwa aka mee ka njem ahụ dị mma, amaara m na nnukwu ajụjụ ndị mmadụ ga-ajụ maka wiil ndị ahụ bụ ị nwere ike ịgbanwe ha ka ha ghara ịnwụ? Ma ọ dị mgbagwoju anya. Anyị ga-abịaghachi na nke ahụ ma emechaa.
The n'azụ ehiwe nke a igwe kwụ otu ebe bụ ngwa ngwa ntọhapụ 141 ma ọ bụ agbam ume 141 dị iche na agbam ume 148 ị na-ahụ na ọtụtụ oge a na anyịnya igwe. Ihe ndị a na-eji ọtụtụ axis ma ọ bụ axles. Ọ bụ ezie na ịnwere ike iburu ụfọdụ, ọ bụghị ha niile, kama ọ bụ ezigbo ego nke Boost 148 hubs ma kwalite Boost 141, nke a pụtara na ị nwere ike ịkwalite wiilị igwe kwụ otu ebe na-enweghị ihe ọ na-atụfukarị.
Can nwere ike tinye ha n'ụgbọala ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị kpebie ịkwalite, ma ọ bụ ree ha ma ọ bụrụ na ị nweta ihe dị iche nke na-abịa na wiil ndị ka mma. - Ọ dị mma! Ọ bụ ya. Nke ahụ dum bụ igwe kwụ otu ebe.
Echere m na m ga-achịkọta ya ugbu a. (Mid-tempo jazzy music) - Ọfọn, ị chetara na-ekwu na ị nwere ike nyochawa gbanwee nke a na tubeless, mana agaghị m akwado ya. Nke ahụ bụ n'ihi na emeghị ihe ndị a maka tubeless ma ọlị.
Lee, ị nwere ike ịtụba ụfọdụ teepu teepu (teepu squeak) na ebe ahụ ma ee, ọ ga-enweta ikuku mana ọ gaghị adaba yana dabere na taya ahụ. Nke ahụ bụ n'ihi na ugwu ahụ dị ezigbo anya na rim a ma bead enweghị ihe ọ bụla ga-anọdụ ala. (Ikuku nfuli ikuku) can nwere ike iji taya dị iche iche nwee mmetụta dị mma mana ị ka ga-enwe nsogbu itinye ya.
Ọ dị mma, oge iji wepụta nnukwu egbe. (Bottle throbbing) - Amaghị m na taya ga-arapara na rim, yabụ emere m ụfọdụ nchekwa ndị ọzọ. (Pịa visor) (compressor hisses) (wheel rattles ng) (ikuku whistling) Ugbu a ka m matara na taya ahụ na-arapara n'akụkụ rim ahụ, m ga-agbakwunye akara akara, ego kwesịrị ekwesị bụ mgbe ọkara ihe ndị a kwuru na ị gbakwunyere ukwuu na ọkara na-ekwu na ị mere. obughi itinye ihe.
Nke ahụ bụ ego zuru oke. (Compressor hisses) Nke a bụ ihe kachasị mkpa banyere ntọala a: Ekwesịrị m ịkpachara anya ịghara ikwe ka taya ahụ tufuo oke nrụgide ma ọ bụ na m ga-atụfu akara ahụ. Nke a bụ ya mere na ọ bụ otú sketchy.
Mgbe ị nọ n'ụzọ na ị ga-enwe taya dara ada, maa ihe, ị ga-alaghachi n'ụgbọala n'onwe gị. Ọbụlagodi na ọnya CO2, ịnwere ike ịnwe nsogbu ịlaghachi bead ahụ na rim. Ka anyị kwuo ntakịrị ihe gbasara Okpokoro ahụ, otu n'ime nsogbu ndị kachasị bụrụ oke na eziokwu na enwere naanị otu.
Agwara m Schwinn nke a, ha kwuru na enwere ike maka ụdị ụmụnwaanyị ịgbagha megide ụdị ụmụ nwanyị maka ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị na-agba ịnyịnya ugwu m maara na-agbago okirikiri ọ bụla masịrị ha, ma a na-akpọsa ya maka ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwanyị. Ọ bụrụ na ọ dabara, ọ dabara. Nke abuo, onwere otutu ndi mmadu no n’ebe ahu ndi gha agba igwe a.
Afọ Iri na enma ma ọ bụ obere nwoke. Na mgbakwunye, ọ bụghị nwanyị ọ bụla nwere mmasị na agba pink, yabụ m ga - asị mee ya obere, ọkara wee nye ya agba ọkụ, dị ka uhie, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụ ọbụna odo odo ga - abụ ezigbo nhọrọ. N'ikpeazụ, ka anyị kwuo maka ogo nke etiti ahụ.
n'okporo ụzọ ịnyịnya maka ndị na-agba ịnyịnya ibu
Ugbu a ndị a anyịnya igwe na-abịa na a ndụ akwụkwọ ikike na ha ma e nwere isịneke ọ bụla na-achị. Iji maa atụ, ọ bụrụ na i tinye ndụdụ 116 millimita na ya, jisie ike. Probably nwere ike ghara ikpuchi nke ahụ.
N'ikwu ya, oge ga-agwa otu igwe kwụ otu ebe a siri jide n'ọhịa. N'ikwu okwu banyere ọhịa, ọ bụrụ na ị maara enyi m Josh si Daily MTB Rider ị maara na ọ na-enwe mmasị ịga ọhịa na igwe kwụ otu ebe, yabụ na ọ dị ka ọ dị mma maka ọnụahịa ahụ, nke ahụ mekwara ka ọ bụrụ ihe ịtụnanya karịa na emeghị ya na taiwan, ọ eme n'ezie na china, nke m maara na ọtụtụ ndị ga-emechu ihu m ghọtara ihe kpatara ya. Ya mere na njedebe e nwere n'ezie maa ụfọdụ acha ọkụ na ala a igwe kwụ otu ebe.
Mana enwere m obi ụtọ na afọ gara aga ma e jiri ya tụnyere ihe ọ bụ ugbu a, ọ bụ nnukwu mgbanwe ma nye m nnukwu nchekwube banyere ihe ha nwere ike iwepụta n'afọ na-abịa maka ụgwọ nke igwe kwụ otu ebe dị n'etiti. N'ụzọ ahụ, ịgba ịnyịnya ígwè dị ọnụ ala karịa onye ọ bụla, nke nwere ike ịbụ ezigbo ihe na akụnụba taa. Ma enwere m mmasị na ihe ị ga-ekwu banyere igwe kwụ otu ebe a, yabụ hapụ echiche gị na ngalaba nke dị n'okpuru ebe a, ọ bụrụ na ị chere na isiokwu a na-atọ ụtọ ma ọ bụ na-atọ ụtọ, biko nye ya mkpịsị aka wee kesaa ya na ụfọdụ ndị enyi, mana ruo oge ọzọ, enwere m olileanya na ị ga-anọ na nchekwa na mgbe anyị nwere ike ịpụ apụ wee chọta njem ọzọ gị.
Gịnị mere o ji sie ike ịzụta igwe kwụ otu ebe?
The ala ọkọnọ na nnukwu ina makaanyịnya igwena-akpata ụkọ. Ihe ndị ahịa chọrọ, ihe ndị ka mkpa, na ụkpụrụ ha na-agbanwe ụlọ ọrụ. Ihe kpatara ya bu nchikota nke igbu oge na nbuli elu na mmasi gburugburuigwe kwụ otu ebena omume ndị ọzọ n'èzí n'ihi ọrịa a.Eprel 20 2021
Ndị anyịnya igwe dị ọnụ ala bara uru?
Eeh. Dị ọnụ ala karịaanyịnya igweanaghị enwekarị ike ịnọ ogologo oge. Agbanyeghị, ahụrụ m ọtụtụ mmadụ nwere otu $ 99igwe kwụ otu ebena ụgbọala ha maka afọ 10, 20. Ọ bụrụ na ịzụta $ 50igwe kwụ otu ebena ị na-agba ịnyịnya ya otu ugboro n'afọ ise ọ bụla, n'ezie, ọ ga-ewetara gị afọ 10.13bọchị 13 2019
Kedu ọnụ ahịa ezi uche dị na ya maka igwe kwụ otu ebe?
Iheanyịnya igweanyị anwalewoegosite n’ihe dị ka $ 300 ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 2,000. Anyị chọpụtara na ego na-azụta igbe dị fechaa nke nwere eriri carbon, aluminom (ma ọ bụ ngwakọta nke ihe abụọ ahụ), ma ọ bụ nchara siri ike na ihe ndị ọzọ dị elu. Mana ị ka nwere ike ịzụta aezigbo igwe kwụ otu ebemaka naanị narị ole na ole dollar.Eprel 14 2016
Pinarello igwe kwụ otu ebe bara uru ego ahụ?
Ewubere ha n'otu uzo na uzo eji agba dika ndi ozo di elu karia nke Colnago naPinarello. Ohaneze nnukwu njikwa na-enweghị nnukwu nkwekọrịta na nkasi obi yana ụbọchị niile ịnyagharị intents. N'ezie, dollar maka dollar, ha na-eme 'njedebe kacha mma'anyịnya igwekarịa ọtụtụ ụdị ịtali.Sep 27 2011
Gịnị dị njọ na Walmart anyịnya igwe?
Walmart anyịnya igwedị arọ, arụghị nke ọma, ma jiri obere ihe mejupụtara ya. Ha anaghị ezukọkarị. Kemgbe ọtụtụ afọ, enwere m 4 ma ọ bụ 5 dị iche icheWalmart anyịnya igwe. Dị ka nwatakịrị, m na-agba ịnyịnya ọnụ alaWalmartugwu Mongooseigwe kwụ otu eberuo ọtụtụ afọ na-enweghị nke ọ bụlansogbuewezuga ụlọ ole na ole na pedal agbajiri agbaji.Ọnwa Ise 30, 2021
You nwere ike ịzụta ịnyịnya ígwè na Walmart?
5 IheGịKwesịrị Knowmara Tupu Oge AhụZụta Walmart Bike. Banye ọ bụlaWalmartma ọ bụ ndị ọzọ na-ere ahịa n'ahịa, nagịAga m achọta ugwuanyịnya igwe, okporo ụzọanyịnya igwe, na obodoanyịnya igwe—Sfọdụ gafere $ 100 na ụfọdụ si ụdịị nwere ikechọta na mpaghara gị nọọrọ onwe haigwe kwụ otu ebeonye na-ere ahia maka ego ọzọ.Bọchị 18 2019
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe m nwere ike ịzụta n'ịntanetị?
Na Bikes Online, ị nwere ike ijide n'aka ịchọta ụdị igwe kwụ otu ebe, site na Hardtail Mountain Bikes to Dual Suspension, Kids Bikes, Road Bikes, Commuter Bikes, Electric Bikes, Urban Bikes, Beach Cruiser Bikes, Gravel Bikes, Touring Bikes and even Tandem Bikes. Gba ígwè bụ egwuregwu sonyere ndị nọ n'afọ ndụ niile na Bikes Online ga-achọ ịgba gị ume na
Kedu weebụsaịtị kacha mma ịzụta ịnyịnya ígwè na India?
HọrọMyBicycle.com bụ e-commerce Portal naanị maka ịzụta ịnyịnya ígwè, ngwa na uwe. Otu nwere ike ịhọrọ site n'ụdị dịgasị iche iche nke anyị na-agba ịnyịnya ígwè Indian na mba ụwa yana ụmụaka na obere ụmụaka.
Nwere ike ịzụta igwe kwụ otu ebe n'ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe?
Ọzọkwa, anyị nwere ike wuru anyịnya igwe niile dị na ntanetị site na ndị otu anyị ọkachamara na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe dị gị nso Nanị tinye mgbakwunye mgbe ị na-azụ ihe ma anyị ga-elekọta ndị ọzọ. N'aka nke ọzọ, nweta ọrụ nnyefe anyị tụkwasịrị obi iji nyefee igwe gị n'ụlọ gị ma ọ bụ ọrụ gị.